Kambodza: Fiantombohan’ny Fitsaràna Mpitarika Iray Tao Amin’ny Khmer Rouge · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Aogositra 2018 2:55 GMT
Ny 30 martsa 2009, natombok’ ireo Fitsaràna Manokana ao amin'ny Tribonaly an'i Kambodza misahana ny Fitsaràna an'ireo Heloka bevava natao nandritra ny vanim-potoanan'ny Kampuchea Demokratika, na ECCC ny fihainoana voalohany an'i Kaing Guek Eav, fantatra amin'ny anarana hoe Douch. Nandritra ny fitondran'i Khmer Rouge, nitantana ilay fonja nalaza ratsy tao Toul Sleng ao Phnom Penh i Douch izay nahafatesana olona an'arivony.
Azo tsirihina eo amin'ny vohikala Cambodia Tribunal Monitor ireo webcasts misy ireo adihevitra.
Manontany tena [amin'ny teny anglisy] ny Pineapple, amin'ny fomba ahoana ny S-21, ilay fonja ao Toul Sleng izay Douch no tomponandraikitra tao, no miditra be ao anatin'ny fandikàna ny hevitry ny
Tamin'io fotoana io ihany, nandefa lahatsoratra iray an'i Phnom Penh Post ho ety anaty tambajotra ny KI Media mampatsiahy fa tsy hoe ela dia mety ho hanao fiaiken-keloka ao amin'ny fitsaràna i Douch.
‘Details are Sketchy’ ireo antsipirihany no nanangona tato [tamin'ny teny anglisy, saingy efa maty ny rohy] ny fandrakofana ny fitsaràna nataon'ireo media mahazatra.
Azo nalaina teto [amin'ny teny anglisy, saingy efa maty ny rohy] ny fanasàn'ny ECCC hanatrika an'ireo fitsaràna azon'ny rehetra natrehana. Ny 31 martsa 2009 no voatondro hanihizana ny fitsaràna an'i Douch.